May | 2010 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on May 28, 2010 by chitnge
အကြောင်းအကျိုးပညာဆိုသည်မှာ အကြောင်းအကျိုးပညာ (Causality) ကို ဒဿနပညာကလည်း စိတ်ဝင်စားပါ သည်။ (The cause produces an effect and the effect record.) လို့ ဒီလို ဖွင့်ဆိုတယ်။ သိပ္ပံမှာလည်း (Universal law of causation) ဆိုပြီး (Causality) ကို ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ မက်(စ်)ဘွန်းတို့လို သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့… ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုခေါ်တဲ့ (Causality) ကို ငြင်းဖျက်ရင် အသိပညာရပ်ကြီးကို ငြင်းဖျက်ရာကျလိမ့်မယ်လို့တောင် ခိုင်ခိုင်မာမာ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်	|2Comments
Scientific Knowledge Part (12)
Posted on May 27, 2010 by chitnge
Part (12) SOME QUESTIONS AND ANSWERS Q1: By what you realize this kind of Miracle? A1: I visualize this kind of Miracle by my objective eye; it may be the third eye or the fourth eye but it is not … Continue reading →
Scientific Knowledge Part (11)
Posted on May 26, 2010 by chitnge
Part (11) Let’s study what Einstein has had in his THE FUNDAMENTS OF THEORETICAL PHYSICS and The Laws of Science and the Laws of Ethics. He said that SCIENCE IS THE ATTEMPT to make the chaotic diversity of our … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Nibbana, Science	| Leaveacomment
သို့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် – ဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ် (ဒဿန) ရေးသားသော သိပ္ပံပညာ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ နှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ အသိညာအကြောင်းအရာများကို အခန်းဆက် ဖော်ပြလျှက် ရှိပါသည်။ အဆိုပါ post များတွင် typing စာလုံးအမှားများပါရှိပါက နားလည်ပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် Admin. No tags for this post.
တရားရသောအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် ဝိပဿနာတရား ကျင့်ကြံကြသည်။ နိဗ္ဗာန်ကို တွေ့မြင်ရန် ရည်သန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်သောအခါ တရားရသည်။ ”တရားရသောအခါ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသနည်း?” ဟူသောအကြောင်းအရာများကို ရေးပြလိုသည်။ အောက်ပါတို့သည် တရားရသောအခါ (သို့မဟုတ်) နိဗ္ဗာန်ကို မြင်ပြီးသောအခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်အတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ (၁) ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် တရားကျင့်ကြံအားထုတ်သောအခါ တရားရလျှင် မြတ်စွာဘုရားကို ပို၍ယုံကြည်လာသည်။ အကယ်၍ တရားကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် တရားရပါသည်၊ သို့သော် မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ သိပ်မကြည်ညိုတော့ပါဟု ဆိုလျှင်ထို ပုဂ္ဂိုလ်သည် တစ်စုံတစ်ခုလွဲမှားနေသော အခြေအနေ၌ရှိသည်။ … Continue reading →
Posted in Articles, Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Scientific Knowledge Part (10)
Posted on May 25, 2010 by chitnge
Part (10) For the philosophy of science, experience is determined only by experience isafavorite statement. The experimentalist declared that nature can be embraced inaformula, but we must so organize our thinking as not to demand it … Continue reading →
အောင်မြင်သည်ဆိုရာဝယ် လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေရှိကြတယ်။ လောကီအောင်မြင်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အရှေ့တိုင်းကတော့ လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ခြင်းပေါ့။ လောကီအောင်မြင်ခြင်းဟာလည်း အောင်မြင်ခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လောကီအောင်မြင်ခြင်းက လောကုတ္တရာအောင် မြင်ခြင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တဲ့ အခါကျတော့ အစိတ်အပိုင်း အောင်မြင်ခြင်းမျှလောက်ပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက လောကုတ္တရာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များမှသိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသတင်းကိုပေးပါတယ် — လောကီမှာလည်း အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအောင်မြင်ခြင်းဟာ အစိတ်အပိုင်း အောင်မြင်ခြင်းပဲလို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ လောကုတ္တရာ အောင်မြင်ခြင်းကမှ တကယ့်အောင်မြင်ခြင်းပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ အောင်မြင်ခြင်းမျိုးမှ တကယ့်အောင်မြင်ခြင်းပါ။ … Continue reading →
Posted in Articles, Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, သာသနာ, လောကုတ္တရာ	|2Comments
Scientific Knowledge Part (9)
Posted on May 24, 2010 by chitnge
Part (9) When we studied about the Cosmological Constant even Einstein called it is the greatest mistake of his life. He admitted that it is his mistake to introduce the cosmological constant. In this case, even the famous scientist did … Continue reading →
Scientific Knowledge Part (8)
Posted on May 23, 2010 by chitnge
Part(8) Once I remembered that Newton had stated like that: I do not know how I may appear to the world, but to myself I seem to have been only likeaboy, playing on the sea shore, … Continue reading →
Scientific Knowledge Part (7)
Part (7) Hawking mentioned that Popper, scientific philosopher recognized the theory asagood one, if it describesawide class of observations, and if it predicts the results of new observations, it would be OK to beagood … Continue reading →
Scientific Knowledge Part (4)
Part (4) Hawking had retrodicted in his famous book “A Brief History of Time” that the universe must have hadabeginning in time. And then he added that he would sacrifice his life to save others. Then he says … Continue reading →